माघे संक्रान्ति: किन र कसरी मनाईन्छ? तिलको लड्डु र खिचडी खानुको रहस्य !
२९ पुष २०७६, मंगलवार २०:०६
काठमाडौं — यो पर्व माघ महिनाको पहिलो दिन मै मनाइन्छ । यस पर्वको अनेक नाम छन् । जस्तो माघे संक्रान्ति, मकर संक्रान्ति, माघी । हाम्रा पूर्खाहरुले यो पर्व मनाउने चलन त्यसै सुरु गरेका होइनन् । माघे संक्रान्ति मनाउनुको खास अर्थ छ, सामाजिक, आर्थिक सबै दृष्टिले । यो पर्व स्वास्थ्य र समाजसँग पनि एकाकार छ ।